ပန်ဒိုရာ: အရင်အတိုင်း 2009
Posted by pandora at 12:50 AM
မျက်မှန်ထူထူအောက်က မျက်လုံးတွေ ... ဘယ်ကိုငေးနေပါလိမ့်။
အရာအားလုံးဟာ အရင်အတိုင်းပဲ ... ။
"... ပဲ ကိုငှက်" ဆိုတဲ့ ၃ လုံးစိုက်ပြီး လှလှပပ လေးလေးနက်နက် ကဗျာဖြစ်သွားတာကိုလဲ အလေးနီ ပြုလိုက်ပါတယ်
သူတော် ( ၁၄.၀၈.၂၀၀၉)
ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ဖတ်ရင်း တွေးနေမိတယ်..း(
ဟုတ် တယ် ဗျာ...တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲ..
“ အ ရင် လို ပါ ပဲ.. အ ရင်လို ဒီ တိုင်း ဘ ၀ထဲ ဒီ အ တိုင်း မျောဆဲ ပါ”
စကား မ စပ် ကျနော် လည်း အရင် ပြန် ဖြစ် တွား ဘီ
ပန်ပန်ရဲ့ master piece ...
လေးစားအားကျရတဲ့ အဆိုတော်ကြီး အောက်မေ့မိပါတယ်နော်။
ပန်းချီလေး အသက်ဝင်လိုက်တာ မဆွဲတာဆို.....
ဒီပုံ အကြိုက်ဆုံးး.. ဟုတ်တယ်..။
အင်း.. ဟုတ်တယ်...။ ရာဇ၀င်များရဲ့ သတို့သမီးလည်း အရင်အတိုင်း.. ဒါပေမဲ့ သူ့အိပ်မက်ထဲမှာတော့ ကြယ်တွေစုံတဲ့ ည.. ပါပါတယ်တဲ့ကွယ်..။
ဟုတ်တယ်... သူ့သီချင်းလေးတွေ အရင်အတိုင်းခံစားလို့ ကောင်းနေတုန်းပါဘဲ
သမိုင်းထဲက ကြယ်တစ်ပွင့်ကို ဦးညွှတ်လျှက် .........
ပန်ပန် ဆွဲတဲ့ ထူးအိမ်သင်ပုံတွေ..အကုန်မိုက်တယ်။ မနှစ်က ဟာလဲ မိုက်တယ်..သိမ်းတောင်ထားသေးတယ်။
တနေ့လုံး ထူးအိမ်သင် ပိုစ့်တွေချည်းပဲ...
တကယ့်ကို ထူးအိမ်သင်နေ့ ဖြစ်နေတာနော်...
သူ့ကို ချစ်ကြတဲ့ သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေ...
P.S. ပုံဆွဲတာ သိပ်တော်တာပဲ...
တကယ်ကို အသက်ဝင်တယ်... :-)
မကေနဲ့ အကြံတူနေပြီ။ ကျွန်တော်လည်း Flickr မှာ သိမ်းထားချင်လို့ လာတောင်းတာ။ လာတောင်းတာ ဆိုပေမယ့် တခါတည်း သိမ်းတောင် သိမ်းပြီးပြီ။ စိတ်မရှိလောက်ဘူးထင်တယ်။ အဟီး
ကိုငှက်ကြီး အလွမ်းမပြေ လာကြည့်သွားပါတယ်.။
နှလုံးသားနဲ့ ဆွဲတဲ့ပုံမို့ ထင်ပါရဲ့ပန်ရယ်… ကိုယ့်ရှေ့ ကိုငှက်အရင်အတိုင်းပြန်ရောက်လာသလိုပဲ…
မျက်လုံးတွေ အသက်ဝင်တယ် ။ အရင်ကပုံ ထက်ပိုကောင်းတယ် ။ ကျနော်ကြိုက်တယ် ။ ရေဆေး ပါးပါးလေး ထည့်လိုက်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲ မသိ။
ဂျပ်စင်ထိပ်နားက လရိပ်ကလေးက လွှမ်းတယ်တဲ့..။ အပြာရောင် ကျောပိုးအိပ်လေးကလည်း လွှမ်းတယ်တဲ့..။
ရာဇ၀င်များရဲ့ သတို့သမီးကလည်း လွှမ်းတယ်တဲ့..။
ဟော့... မနက်ခင်း ပန်းလေးတွေထက် ပိုလှတဲ့ ပါးနုနုလေးကလည်း လွှမ်းသတဲ့..။ စင်သီယာကလည်း လွှမ်းတယ်. အိမ်မြောင်တွေကတောင် လွှမ်းတယ်... ကျနော်တို့လည်း အတိအကျကို လွှမ်းနေတုန်းပါပဲဗျာ....။